The Panelarium Klinika Urology - Famolavolana
Klinika Urology Ny Panelarium dia toeram-pitsaboana vaovao ho an'ny Dr. Matsubara iray amin'ireo mpandidy vitsivitsy voamarina ny fampandehanana ny rafi-pandidiana robotic da Vinci. Nomena aingam-panahy avy amin'ny tontolo nomerika ilay endrika. Ny singa rafitra sy lenta 0 sy 1 dia mifamatotra ao amin'ny habaka fotsy ary voarakitra takelaka izay mivoaka avy amin'ny rindrina sy ny valin-drihana. Manaraka ny lafiny famolavolana mitovy ihany koa ny tany. Ireo takelaka na dia mihetsika aza ny endri-javatra mahazatra azy ireo dia lasa famantarana, dabilio, counterpartner, vondron-tanana ary na dia fitantanana varavarana aza, ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ny mason'ireo maso-maso dia mahazo tombony kely indrindra ho an'ny marary.
Anaran'ny tetikasa : The Panelarium, Anaran'ny mpamorona : Tetsuya Matsumoto, Anaran'ny mpanjifa : Matsubara Clinic..
Klinika Urology Tetsuya Matsumoto The Panelarium